Oghere Nchaji nke China EV Elu eletriki chaja Wallbox EV Charger Point 40A Nrụpụta na Ụlọ ọrụ | Tech Joint
Ogige Nchaji EV-Ewuru chaja eletriki Wallbox EV Charger Point 40A
Ụlọ ọrụ kacha ere US Ụdị 1 EV Home Level 2 Charger, EV Charging Station, Anyị na -anabata ohere ka gị na gị na -azụ ahịa ma nwee olile anya inwe obi ụtọ n'ịgbakwụnye nkọwa nke ihe anyị. Ezigbo mma, ọnụahịa asọmpi, nnyefe oge na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya ga -ekwe nkwa. Maka ịjụ ajụjụ ọzọ, egbula oge ịkpọtụrụ anyị.
Ngwongwo na-agba ọsọ nke ọma, ndị ọrụ ego na-enweta ego ruru eru, na ụlọ ọrụ ka emechara ire ahịa; Anyị abụrụla ndị anyị hụrụ n'anya dị n'otu, onye ọ bụla na-anọgidesi ike na nzukọ a na-erite uru '' ịdị n'otu, mkpebi siri ike, ntachi obi '' maka ụlọ nrụpụta kacha ere ụlọ nchaji cha cha nke etinyere ọkụ eletrik Wallbox EV Charger Point 40A, ọ bụrụ na ị na-achọ ọkwa dị elu. ịdị mma, nnyefe ngwa ngwa, kacha mma mgbe enyemaka na ezigbo onye na-ebubata ihe bara uru na China maka njikọ ọgbakọ ogologo oge, anyị ga-abụ nhọrọ kachasị dị irè gị.
Nke gara aga: Mepụta ọkọlọtọ chaja EV ọkọlọtọ US maka ụgbọ ala eletrik nwere ụdị 1
Osote: 16A 32A 40A 48A New Energy Electric New imewe mgbidi n'ịnyịnya ev chaja electric ụgbọ ala batrị chaja
chaja ngwa ngwa maka ụgbọ eletrik
Ụgbọ ala eletrik ngwa ngwa
ngwa ngwa ev chaja
Ụlọ Nchaji Ụgbọala Ọha
ụlọ ọrụ nkwụnye ọhaneze